ကျားကြည့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Style & Beauty » ကျားကြည့်
အားလုံးကို မင်္ဂလာပါ လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သ လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လူသစ်တစ်ယောက်ပါ ။ မန်းတလေးဂေဇက် ကို ဖတ်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ ။ မန်ဘာ အဖြစ် ဝင်ခဲ့တာ နှစ်ရက်လောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ် ။ ကျွန်တော် ပို့ စ်တင်ချင်ပါတယ် ။ ဘာတင်ရမလဲ မသိလို့ဓါတ်ပုံတွေ တင်လိုက်ပါတယ် ။ အခု ပုံတွေဟာ ဖေ့ဘုတ် က ပုံတွေပါ ။ ကျွန်တော် ဖေ့ဘုတ် သုံးတာ ၄ နှစ်ရှိပါပြီ ။ ဖေ့ဘုတ်မှာ မြန်မာမိန်းခလေးများရဲ့ အလှဓါတ်ပုံများကို ဘယ်လောက်အထိ ကျွန်တော် တွေ့ ဖူးသလဲ ဆိုရင် ဖင်တုံးလုံးချွတ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ အထိပါ ။ ပြည်တန်ဆာ မဟုတ်ဘူးနော် ကျောင်းသူလေးတွေပါ ။ ကျွန်တော် အလျှင်းသင့်သလို တင်ပေးသွားပါမယ် ။ တစ်ခု ရှိတာ က ကျွန်တော် အခုတင်သော ပုံများမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် များ မဟုတ်သည့် အတွက် ၊ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ ကွန်မင့်များ ကို ငြင်သာစေလို ပါကြောင်း မေတ္တာ ရပ်ခံ ပါရစေ ။ တစ်ရက် ကို လေးပုံတင်ပါမယ် ။ ကွန်နက်ရှင် နှေးကွေးမှုကြောင့် ပါ ။ အားပေးကြပါနော် ။
တစ်ရက် ကို လေးပုံတင်မယ်ဆိုရင် ၊ ဆာဗာ မလိုအပ်ပဲ လေးသွားလိမ့်မယ်နော် ။
သမီးလေးတွေလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း အမနာပ အပြောခံရဦးမယ် ။
အခုခေတ်ကြီးမှာ ချွတ်ထားတာကော ၊ မချွတ်ထားတာကော ပုံတွေ အောတိုက်ပါကွယ် ။
ဘာမှ မထူးခြားရင် ၊ ထင်ရှားတဲ့သူတွေပုံ မဟုတ်ရင် ၊
သတင်း တန်ဖိုး ၊ အနုပညာ တန်ဖိုး မရှိရင် ၊
ဘာဖြစ်လို့ တင်ချင်တာလည်းကွယ် ။
ပို့ စ်တင်ချင်ပါတယ် ၊ ဘာတင်ရမလဲ မသိရင် ၊
ကိုယ့် ဘဝ ၊ ကိုယ့်ဘေးနားက အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ရေးပေါ့ ။
အဲလောက် မရေးနိုင်သေးရင်လည်း ၊
ခရီးသွား ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေါ့ကွယ် ။
ရွာထဲက ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် ။
ခရီးသွား ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေါ့ကွယ် ။ ”
အစ်ဘ ရေ .. ချစ်လို့ ခင်လို့ ကြပ်(စ၊ နောက်) တယ် လို့ပဲ သဘောထားပါနော့။
စာလုံးပေါင်းက မှားပြန်ပြီ … သတ်ပုံ အသင်းမလာခင် ပြင်တော့ လဲ Comment Editor ကြီးက loading ဆိုပြီး … ရပ် ရပ် သွား … အဘ FR ရေ .. အစ်ဘ လို့ မှားရေးမိတယ် .. ဆောရီး ပါဗျာ။
ဟုတ်ပ နယူးလေးရယ် ရွာထဲကို အော်ပြီးဝင်လာတာလဲ ကြောက်စရာကောင်းတာ.. ဟဟဟ တခြားဟာလေးလဲတင်လို.ရပါတယ်.. ဒါမှမဟုတ်လဲ ရွာသားလူပျို၊လူပျိုသိုး အဖွဲတွေ အီးမေးလ်တောင်းပြီး တိတ်တိတ်ကလေးပို.ပေးပါလား ဟိဟိဟိ….
အကြံတစ်ခုပေးချင်တယ်… ဖေ့ဘုတ်က ပုံတွေအားလုံး ရွာသူ၊ရွာသားတွေ အကုန်သိပြီးသားလို.ထင်တယ်… အသစ်ကလေး ပို.စ်တင်ချင်ရင် …. လမ်းသွားရင် မျက်စိရှင် (ရွာသူ မအိတုံလို) ၊ ကင်မရာတစ်လုံး ကိုယ်နဲ.မကွာဆောင်ထား (လေးပေါက်၊M လုလင်၊ ကိုစိန်သော့ တို.လို)၊ စားများများဖတ်ပြီး သူများဝေဖန်နိုင်အောင်လုပ် …. ပြီးရင် သတင်းကို အမြဲနားစွင့်..
သူများထက်ဦးပြီး ထူးတဲ့ သတင်းတွေ ၊ပို.စ်တွေတင်နိုင်ရင် ရွာသားအသစ်လေးကို အားလုံးက ချစ်ခင်လေးစားကြမှာပါ…
အသစ်ကလေးရယ်… ဖင်တုံးလုံးနဲ.ပုံများ ဒို.ဆီမှာပေါလို. လိုချင်ရင် အီးမေးလ်သာပေး Gmail တောင်ပြည့်သွားမယ်. ဟိဟိဟိ…(ပြောရတာရှက်တာ.. သူလုပ်မှပဲ သူများတွေသိကုန်တော့မယ် ဟိဟိဟိ
တော်ပါပြီဗျာ ဖော့ဖုတ်ဆို ရင်နာလို့မသုံးဘူး
မောင်ပေတို့ ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ဆို ဆရာဆရာကြီးတွေ
နာ့မှာဆို ၂၅၀ဟာ့ဒစ် နဲ့အပြည့်ရှိတယ်ကွ
အပြင်မှာ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆို တင်ဂျာ
သများတို့ နတ်ထဲက အ၀ှာပြုရတာ အ၀ှာမဖြစ်ဘူး
Celebrity ဆို ပြဿာမရှိဘူး
သူများတားတမီးပုံတွေ ခွင့်မတောင်းပဲ တင်မိရင် ရှော့ရှိတယ်..
သများတို့ ကတော့ ဘာလာလာပါ ပြဿနာမရှိဘူး..
အပေါ်က အူးလေးတွေပြောသလိုပဲ..တခြား ငဲ့စရာလေးတွေရှိတာနဲ့ 
အဲလို ပုံတွေ တင်မယ် ဆိုအဲ့လို ပုံတွေချည်းပဲ သီးသန့် စုတင်တဲ့ နေရာရှိတာမို့ အဲလိုဆိုက် ကိုပဲရွေးပြီး အဲလို ပုံတွေတင်ပါလားနော့။ အဲလို ဆိုအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေ သွားနိုင်မယ် ထင်တာပါပဲ။ အဲလို ပုံတွေကြည့်ချင် ရင်အဲလို ဆိုက် တွေကို သွားမယ် လေနော့။ သတင်းစာ လို့နံမည် ပါတဲ့ ဆိုက် မှာအဲလိုပုံတွေ ပါနေရင်..သင့်တော်ပါ့မလားလို့ (တွေးမိတာလေးပါ။) နောက်.. celebrity လဲ မဟုတ်တော့လေ.. ငဲ့ရမယ့် အကြောင်းလေးတွေလဲ ရှိတော့ကာ …. ကြိုဆိုပါတယ်နော့ .. အဲလို ပုံတော့ တော့ တဆိတ် … လုပ်ပါနဲ့ ဗျာ … သူတို့လေးတွေ နံမည် ပျက်ကြရှာမယ် …
အမလေးဗျာ။ကိုယ်တော်က နာမည်လဲရှည်လှသလို၊အတွန့် အတက်များလှပါလား။
ကျားကြည့်တော့ မကြည့်နဲ့ကွယ်…။ ကြောင်ကြည့်တောင်ရင်ထဲ ကလိကလိ ဖြစ်နေသေးတာ မို့ပါ…။
Photo Uploader = ဓာတ်ပုံတင်သူ ……….
( အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်မယ် ထင်တာပဲ … )
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပါဗျာ …. ။ အခုလို ပုံတွေကို ကြောတာဟုတ်ဖူးနော့ … ။
ဗဟုသုတ ရစေမယ့် ပုံတွေပေါ့ဗျာ …. ။
ကိုအံစာတုံးတို့ ၊ကိုFR တို့ ပြောသလိုပေါ့ဗျာကို2ဒီ 1000000000000000000000000000ရေ
ခရီးသွားလေးတို့ မှတ်မှတ်ရရ သမိုင်းဝင်ပုံလေးတွေတော့ ကြည့်ပါဗျာ။ကျနော်ဆို MG မှာစာဝင်ရေးဖြစ်တာ
တစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီ ဓါတ်ပုံမတင်တတ်လို့ ။သူကြီးကကူ၊ရွာထဲကကူမှရပါလေရောဗျ။ခုဆရာက
ဖတ်မိလိုက်တဲ့ မှတ်ချက် လေးတွေကို ကြည့်ပြီး တွေးလိုက်မိတာလေးပါ။
တမင်ခွဲခြားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ကနေကို ကိုယ့်အပြုအမူ ပေါ်မှာ အလိုလို ခွဲသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီပုံ နဲ့ Post တင်သူ အပြောအရ ဆိုရင် ဒီသမီးလေး မျိုးလေးတွေဟာ သာမာန်ကျောင်းသူပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ သူ တို့အရိုက်ခံခဲ့တဲ့ ပုံ အရ လူအများမြင်ကွင်းမှာ ထားဖို့ မသင့်တော်ခဲ့ဘူး။
တစ်ခြား အဆင့်အတန်း လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Site ထဲမှာ ဘဲ ရှိသင့် တယ် လို့ အများက တွေးကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဘာဖြစ်သွား လဲ အမှန်ကို သိမြင် စဉ်းစား လိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ခဏတာ ရေတပွက်စာလေး ကြည်နူး ပီတိ ရနိုင်ဖို့ သူများကြည့်တာ ခံဖို့ ကိုယ့်အဆင့်အတန်း ဘယ်အထဲ ရောက်သွား တတ်လဲ ဆိုတာကို သမီးငယ် လေးများ သတိထား ဖို့ကောင်းပါပြီ။
ကိုယ့် အလှ၊ ကိုယ့်တန်ဖိုး အစစ်ဟာ ကော့ကံကား ချွတ် ဖော် ရိုက်ပြီး အများကို ပြတဲ့ ရုပ်အဆင်း ပေါ်မှာ မတည်ပါဘူး။
အဲဒီ လိုမျိုး နဲ့ လူတွေကို ဆွဲဆောင်မှု ဟာ အချိန်တို အချိန်ပိုင်း မှာ ဘဲ ပြီးသွားပါတယ်။
သမီးတို့ နဲ့ ဘဝ တစ်လျှောက် လုံး တွဲပါမလာပါဘူး။
နောက်ပြီး ကိုယ့် ရဲ့ အဲဒီ ပုံစံကို ကြည့်မဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ လေးစားစိတ် နဲ့ ကြည့်ဖို့ ခက်လှပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ဘဝ တစ်လျှောက် လုံး တွဲပါ စေ မဲ့ စွဲဆောင် ခြင်း ကတော့ အများအကျိုး ဆောင်ချင်တဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက် စိတ်ထားအလှ နဲ့ ပညာ အလှ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ထားလှ သူ ဟာ မဟုတ်တဲ့ နည်း နဲ့ သူများ ကို မဆွဲယူ တတ်ပါဘူး။
ပညာ ကို တန်ဖိုး ထားသူဟာ လဲ သူ့ရှာနေတဲ့ ပညာ အာရုံ နဲ့ ကော့ကံကား ချွတ် ဖော် နေဖို့ အချိန်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
လှချင်တာကတော့ ဘယ်မိန်းမ မဆိုပါဘဲ။ ကျက်သရေ ရှိရှိ အဆင့်အတန်းရှိရှိ လှနိုင်တဲ့ နည်းတွေအများကြီးပါ။ ပိုက်ဆံ အတင်းသုံးပြီးမှ လှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သမီးငယ်များ အားလုံး အလှ စစ်စစ် ဖြင့် လူတကာကို စွဲဆောင် နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
သူများဆီမှာ မှီခို နေစရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် ရပ်နိုင် တဲ့ ကိုယ့် အတွက် ရေရှည် တင့်တယ် မဲ့ အများကို အကျိုးပြုတတ်တဲ့ မြန်မာ အမျိုးကောင်းသမီး အဖြစ် ဘဝ လမ်း ကို ရွေးပြီး လျှောက် နိုင်ကြပါစေ။
PS – ဒီ Post မှာ အများ အတွက် ကိုယ်စားပြု စဉ်းစားပြီး မှတ်ချက် ပေးထားသူများ အားလုံး ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်မ တကယ် လေးစားပါတယ်။